A na-ere PlayStation 4 Pro, ị kwesịrị ịzụta ya? | Akụkọ akụrụngwa
A na-ere PlayStation 4 Pro, ị kwesịrị ịzụta ya?
Apple tinyere n'ụdị ụzọ pụrụ iche nke na-ere otu ngwaahịa ahụ ugboro abụọ, ma ọ bụ opekata mpe ngwaahịa yiri nke ahụ, ọ bụkwa ụlọ ọrụ akpọrọ "S". Ọtụtụ ụlọ ọrụ abanyela na nke a, ma ugbu a, ọ rutela ahịa ebe ọ na-adịbeghị, ahịa maka njikwa vidiyo. Sony nwere obi ụtọ iweta ọnwa ole na ole gara aga na PlayStation 4 Pro, ụdị dị mma na nke siri ike nke PlayStation 4 ya, ya bụ, yana ndakọrịta zuru oke, ya bụ, otu usoro ahụ na injin ọzọ. Taa, November 10, PlayStation 4 Pro na-ere na ihe niile ị na-emebu, ka anyị tụọ uru ya na ọghọm ya.
Anyị ekwuola ọtụtụ ihe banyere sistemụ ọhụụ ọhụrụ Sony, agbanyeghị, ọ bụ oge ịme obere nyocha ka ị wee chee maka oge ikpeazụ ma ọ bara uru ịzụrụ ya. Nke mbụ nke ọnụahịa ahụ, ihe na-ekpebi ihe, ọkachasị maka ndị ọrụ ahụ enweghị usoro PS4 gara aga, nke ọhụrụ na nke dị ike nke Sony Ọ ga-efu € 399,99, nke bụ € 100 karịa mbipụta gara aga na ụdị Slim ugbu a nke ya, yana 1TB nke nchekwa.
N'aka nke ọzọ, ma ọ bụrụ na anyị nwere ụdị ochie nke PS4, ọ nwere ike ọ gaghị adị ka ọ mara mma, mana ihe gbanwere mgbe anyị chetara na PSVR na-eri otu ihe ahụ. Ihe kariri otu onye ga - enwe nsogbu a na ekeresimesi a: "PlayStation 4 Pro ma ọ bụ PlayStation VR?"
N'aka nke ọzọ, ikpo okwu, anyị na-echeta na ndị ọrụ PS4 na PS4 Pro ga-egwu n'otu gburugburu na otu egwuregwu ahụ, Sony adọla aka na ntị na mmezi FPS agaghị ahụ anya n'ihe gbasara egwu ịntanetị, naanị na otu usoro ọkpụkpọ, ka ọ ghara ime ka ndịiche dị n'etiti ndị ọrụ.
Ndien ke akpatre na ike, Ihe ọhụrụ Sony console ga-enye ohere nke igwu egwu na 1080p nwere 60FPS kwụsiri ike na textures ka mma maka GPU ya abụọ (x2 iji tụnyere PS4) na mgbasawanye nke DDR3 RAM. Ọrụ HDR, ọzọ, na-akọrọ na ụdị kpochapụwo. N'ikpeazụ anyị nwere ihe kpatara ya, mkpebi 4K, nke Sony dọrọ anyị aka na ntị na anyị ga-atụfu 30FPS n'ụzọ na ndozi ederede.
Ndị a bụ akwụkwọ akụkọ ọhụrụ nke PlayStation 4 Pro, ugbu a ọ bụ oge gị: Ekwesịrị m ịzụta PlayStation 4 Pro?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Home » Videogames » A na-ere PlayStation 4 Pro, ị kwesịrị ịzụta ya?
Naanị ụbọchị 1 fọdụrụ maka Ulefone na-enye onyinye pụrụ iche